गण्डकी विकास बैकको एकिकृत कारोबारको शुभारम्भ | Jukson
पोखरामा स्थापित फेवा विकास बैक र गण्डकी विकास बैक एक आपसमा मर्ज भएर गण्डकी विकास बैकको नामबाट सञ्चालनमा आएको छ ।
एकिकृत कारोबार शुभारम्भ कार्यक्रमको उद्घाटन प्रमुख अतिथिको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले भौतिक रुपमा उपस्थित नभएपनि प्रविधिको माध्यमबाट बैकको उद्घाटन गरेका छन् ।
कार्यक्रमका विशेष अतिथिको रुपमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका प्रमुख मान बहादुर जि.सिले बैक परिवारलाई सफलताको शुभकामना दिए ।
मर्जपछि बैकको कुल चुक्तापूँजी रु. १ अर्ब ८४ करोड र निक्षेप रु. १८ अर्ब २३ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, कर्जा रु. १६ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ भने ग्राहक संख्या २ लाख पचास हजार र कर्मचारी ४ सय जना भएको छ । बैंकको शाखा संख्या ५० र एटिएमको संख्या २१ पुगेको छ ।
मर्जपछि अध्यक्षमा जगन बहादुर गुरुङ्ग र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रेशम बहादुर थापाले जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन् । कार्यक्रममा साविक फेवा विकास बैकका लिमिटेडका अध्यक्ष विन्दु कुमार थापाको अध्यक्षता रहेको थियो ।
लाप्राक सामुदायिक भवन निर्माणका लागि तीन लाख हस्तान्तरण
सरकारले ल्यायो रोल्पामा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम